घर	मनोरन्जन समाचार	'RRR' एक आधुनिक, नन-स्टप एक्शन एपिक हो जसले नेटफ्लिक्सलाई मात्र हिट गर्छ
जब हलिउडमा ठाउँ छैन, 'आरआरआर' पृथ्वीमा हिंड्नेछ।
by तिमोथी Rawles जुन 1, 2022
by तिमोथी Rawles जुन 1, 2022 845 हेराइहरू
डराउने चलचित्र नभए पनि, Rrr, अब Netflix (US) मा स्ट्रिमिङ, एकदमै भव्य, यति महाकाव्य, यति फराकिलो छ कि हामीले तपाईंलाई यो छुटाउन अनुमति दिन सकेनौं — हामीले तपाईंलाई यो अवस्थित छ भनी जानकारी गराउनु पर्ने थियो।
उपशीर्षकहरू विचलित छैनन्
हामीलाई थाहा छ कि सबटाइटलको कुरा गर्दा तपाईंहरू मध्ये कोही थोरै डराउनुहुन्छ तर कति अचम्मको सिनेमेटिक बहादुरी दिनुभयो। Rrr यसको कथा बताउन प्रयोग गर्दछ, तपाईंको आँखाले जे भए पनि सुन्ने धेरैजसो गर्नेछ। त्यहाँ कुनै पनि टाढा हेर्न छैन — र यो चलचित्र हो 180 गौरवशाली मिनेट ननस्टप भिजुअल इफेक्टहरू, स्टन्टहरू, संगीत र हो डरलाग्दो प्रशंसकहरू, रगत र हिंसा! स्टीवन स्पिलबर्गले पनि यो चलचित्रलाई अझ राम्रो बनाउन सकेन।
यो लेख चलचित्र समीक्षा होइन, र म तपाईंलाई प्रयास गर्न र oversell गइरहेको छैन। तर म यो भन्छु: केवल पहिलो 10 मिनेट हेर्नुहोस् र यदि तपाईं पूर्ण रूपमा लगानी गर्नुहुन्न भने मलाई एक टिप्पणी छोड्नुहोस् र @me व्यक्तिगत रूपमा मलाई चपाउन। तपाईं F शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पूर्ण रूपमा ठीक छ।
RRR भनेको के हो?
पहिलो, एक अस्वीकरण हो, फिल्म निर्माताहरु द्वारा बनाईएको। यद्यपि Rrr ऐतिहासिक तत्वहरू छन्, यो तथ्यमा आधारित छैन। जीवित वा मरेका मानिसहरूसँग कुनै पनि समानताहरू विशुद्ध संयोग मात्र हुन् भन्छन्। बाघको लखेट नै यसको प्रमाण हो । साथै, कि बाघ दृश्य बनाउँछ ग्लेडिएटरको सुपर बाउल आइतवारमा किटन बाउल जस्तो देखिन्छ।
चलचित्रको शीर्षक कार्ड पनि 40 मिनेटमा अनस्क्रिनमा आउँदैन!
निर्देशक राजामौली वास्तविक जीवनका स्वतन्त्रता सेनानी कोमराम भीम र अल्लुरी सीताराम राजु (राम) को कथाहरूबाट चासो राखेका थिए। पटकथा लेख्दा उनले कलात्मक स्वतन्त्रता लिए र भीम र अल्लुरी वास्तवमा साथी बन्ने ब्रह्माण्डको कल्पना गरे।
यी पात्रहरू खेल्दै भारतका दुई ठूला ताराहरू, एनटी रामा राव जूनियर ("जुनियर एनटीआर" भनेर चिनिन्छन्) र राम चरण हुन्।
Rrr यो जोडी र भारतमा ब्रिटिश राज विरुद्धको विद्रोहको कथा हो। राजामौलीले उनीहरूलाई अलौकिक शारीरिक शक्तिहरू दिएका छन्: यो $ 72 मिलियन डलर ओभर-द-टप ननस्टप एक्शन फंतासी हो।
स्पष्ट रूपमा, ब्रिटिश क्राउनले 1920 मा सेट गरिएको यो कथामा राम्रो काम गर्दैन। तिनीहरू दुष्ट, जातिवादी उत्पीडकहरू जस्तै बनाइएका छन् जसले लगातार भारतका मानिसहरूलाई उपमान मानवको रूपमा व्यवहार गर्छन्। यो समय को लागी सही हुन सक्छ? तर, यसलाई ट्रिगर चेतावनी मान्नुहोस्।
कार्य! कार्य! कार्य!
सहज फ्ल्याशमोब्स, भव्य सेटहरू, ढिलो-गति कार्य कार्यहरू —- जहाँ CGI पनि कलात्मक टेपेस्ट्रीको अंश हो —- Rrr चलचित्र मनोरन्जन को दुनिया को एक महान इशारा हो। हनी ब्याजर जस्तै, यो चलचित्रले af*** दिदैन!
जब तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि फिल्म निर्माताहरूले सम्पूर्ण चलचित्रको लागि आफ्नो विशेष प्रभाव बजेट हिट गरेका छन्, उनीहरूले यसलाई अझ बढी ओभर-द-शीर्ष अनुक्रमको साथ पछ्याउँछन्। कुल्ला र दोहोर्याउनुहोस्।
यसमा केही समस्याहरू छन्, तर, कसले वास्ता गर्छ?
यद्यपि यो सिद्ध छैन; केहि अभिनय अपरेटिक छ र नाटक साबुन हिस्ट्रियोनिक्स मा भिजेको छ, Rrr कुनै पनि नरम दागहरू मार्फत जोत्न यसको इन्जिनमा पर्याप्त स्टीम समावेश गर्दछ। र जब यो सबै समाप्त हुन्छ, तपाइँ चाहानुहुन्छ कि त्यहाँ रमाइलो गर्न अर्को 180 मिनेट थियो।
हो, यो ३ घण्टा लामो छ! र यो गौरवशाली छ!
मलाई लाग्छ कि यो सबै पछि समीक्षामा परिणत भयो। र हुनसक्छ मैले यसलाई अलिकति ओभरसेल गरें, तर यदि मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ कि बीचको नजिकैको एक अनुक्रममा, जंगली जनावरहरूको टायर गरिएको गाडी ब्रिटिश सेनामा ढिलो गतिमा छोडिन्छ जहाँ उनीहरूले सिपाहीहरूलाई कुटेर, इम्पेल गरेर बर्बाद पार्छन्। , र पूर्ण पाँच-प्लस मिनेटको लागि मृत्यु रोलिंग, के तपाइँ जे भए पनि हेर्न चाहनुहुन्न?
त्यो दृश्य मात्र कुनै पनि अन्तिम अभिनयको लागि पर्याप्त हुनेछ मार्वल फिल्म, तर यहाँ यो अधिनियम I को सानो अंश मात्र हो!
यदि तपाइँ चलचित्रहरू मनपर्छ भने
Rrr एक उत्तम चलचित्र होइन, तर सुरु देखि अन्त्य सम्म यो कहिल्यै छोड्दैन। रंगीन, कुरकुरा, र अथक राजामौलीले कुनै पनि एक्शन फिल्मको पछि आउने गन्टलेटलाई तल फ्याँकेका छन्। हलिउडले कहिल्यै रिमेक गर्ने प्रयास गर्दैन - मलाई लाग्दैन कि उनीहरूसँग बलहरू छन्।
होइन, यो डरलाग्दो फिल्म होइन, तर अविश्वसनीय, दृश्यात्मक रूपमा आकर्षक, महाकाव्यहरूका प्रशंसकहरूको रूपमा, Rrr बाट सम्मानित उल्लेख प्राप्त गर्दछ iHorror.